Teepee kunye nomdaka - Moi Mili
Iintente ze-Moi Mili yindawo entle yokuzihlaziya nokuzonwabisa yomntwana ngamnye. I Teepees zethu ezinefom yeklasi zithungwe kwilaphu lomqhaphu. Yonke into yenziwe ngombala wokucoca ikotoni. Iimodeli ezikolu luhlu zirhangqwa ngombala womdwebo wombala wentente. Lo mhlobiso unika umlinganiswa wethu wentente.
Teepee ineefestile ngasekhohlo. Izikhuni zenziwe zaza zalungiswa, yonke loo nto ibotshwe ngentambo yeebhlukhwe. Iintonga zokhuni zifihliwe kwimigudu ethungelweyo ezantsi. Iintente ezintle zineendonga ezi-5 kunye nesiseko sepentagonal, ezenza ukuba zizinze kwaye zikhulu kuneentente ezinesiseko sesikwere.
Sivelisa ePoland, ikakhulu kwiimveliso ezivela kwimvelaphi yasePoland. Sithatha inkathalo kuzo zonke iinkcukacha kunye nomgangatho ophezulu wokusebenza kunye nemveliso. I tipi iza nencwadana yemigaqo kunye nesigqubuthelo. Siyakumema ukuba uzonwabise kwihlabathi lethu.
"Inkanyezi egolide" intente yelinen teepee
Intente ye Teepee "Miętowelove"
Intente yeTepeepee yabantwana "yintsimi yeLavender"